Safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga oo lakulmay madax katirsan wasaarada arrimaha dibadda Turkiga - Tilmaan Media
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga oo lakulmay madax katirsan wasaarada arrimaha dibadda Turkiga
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Amb.Jama Aidid ayaa magaalada Ankara kulan kula yeeshay Nur Sagman oo ah uqaabilsanaha wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ee Afrika. Qoraal kooban oo ay soo dhigtay barteeda twitterka ayay ku sheegtay in ay safriika kawada hadleen arrimo khusseeya xiriirka labada dal iyo umuuraha gobolka.
Sidoo kale waxaa isaguna bartiisa twitterka qoraal kooban soo dhigay Amb. Jama Aidid oo sheegay in ay kulan muhiim ah yeesheen kana wada hadleen xiriirka labada dal, isla markaasna uu warbixin kooban ka siiyay wadahadallada kafurmay Jabuuti ee u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Somaliland.
Kulankaan ayaa ku soo beegmaya xilli wareegii koobaad ee wadahadallo heer sare ah ugu soo xirmeen dalka Jabuuti, Dowladda Federaalka iyo Somaliland. Turkiga ayaa hadda kahor garwadeen ka, ahaa wadahadallada labada dhinac, waxayna martigaliyeen kulamada qaybtood oo ay isku arkeen madaxda Dowladda Federaalka iyo Somaliland.
Turkigu waxay u magacaabeen Olgan Bekar oo ahaa safiirkii hore Turkiga u fadhiyay Soomaaliya, ergayga u qaabilsan arrimaha wadahadallada Dowladda Federaalka iyo Somaliland. Waxaa shaki laga qabi karaa sababta aysanTurkigu uga qayb galin shirka, iyada oo dalal ay kamid yihiin Maraykana, Itoobiya iyo urur goboleedyo dhawr ahi goob joog ahaayeen.
Safiirka Qatar ee Soomaaliya oo gaaray Kismaanyo
Picking Speedy Solutions For How To Start A Biography